Indawo yokuhlala kugalari - I-Airbnb
Indawo yokuhlala kugalari
I-ifulethi ephelele ibungazwe ngu-Federica
Ukukhansela kwamahhala ngaphambi komhla ka-Okt 23.
Indawo yokuhlala encane esakhiweni esingokomlando, esitholakala ngezinyathelo ezimbalwa ukusuka enkabeni ye-Acqui Terme, esilungele noma yiluphi uhlobo lwenkonzo (isitolo esikhulu esakhiweni esifanayo, ekhemisi, njll.). Ifakwe umshini wokuwasha, i-TV, ihhavini, i-microwave, ifoni, isicoci sevacuum kanye nezindawo zokupaka zamahhala eduze.
Futhi kuwuhambo lwemizuzu eyi-10 ukusuka ekhaya lasebekhulile le-"villa Igea" kanye ne-spa.
Izivakashi zizokwazi ukufinyelela kuzo zonke izindawo ezikuleyo ndawo
4.88 · 19 okushiwo abanye
Indawo yokuhlala isendaweni ethule kakhulu, yize iseduze nesikhungo. Njengoba isezingeni lesithathu futhi ifakwe izinto zesizukulwane esisha ngisho nangezikhathi ezimatasa kakhulu, ukuthula kuqinisekisiwe.
Ngiyohlale ngitholakala nganoma yiluphi ulwazi nge-imeyili kuleli kheli elilandelayo federikyna@tiscali.it, noma ngocingo kulezi zinombolo ezilandelayo: 3355953551 (Marinella) noma 3400871885 (Federica).